Firewall Config: Gufw Firewall အတွက်အကောင်းဆုံး Graphical Firewall အစားထိုးမှု Linux မှ
Firewall Config: Gufw Firewall အတွက်အကောင်းဆုံး graphical Firewall အစားထိုးမှု
Linux Post Install လုပ်ပါ | 20/09/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူများ (အိမ်များ / ရုံးများ) ၏နယ်ပယ်တွင်aကိုသုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် operating system မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ အကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆိပ်ကမ်းဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းအခြားသူများများထဲတွင်။
ဤလှုပ်ရှားမှုများသည်များသောအားဖြင့်ဗဟိုမှချုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာယူနစ်များ ဖြတ်. servidores နှင့်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည် ကွန်ပျူတာများ အားဖြင့် အိုင်တီအထူးကုများမရ။ ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ user တစ်ယောက်ကဒါကိုသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အခါသူ့ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်တွေရှုပ်ထွေးမနေဖို့အတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဂရပ်ဖစ်အပလီကေးရှင်းတွေရှိတယ်။ "Firewall ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ" y Gufw.
1 Firewalls, GUFW နှင့် IPTables များအကြောင်း
2 Firewall Config: firewalld အတွက် GUI configuration tool
2.1 Firewall Config ဆိုတာဘာလဲ။
Firewalls, GUFW နှင့် IPTables များအကြောင်း
ထုံးစံအတိုင်းပဲ၊ ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အ ၀ မသွားခင်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးယခင်အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုထားခဲ့မယ် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ Firewall များ၊ GUFW နှင့် IPTables များ၎င်းတို့အားအောက်ပါလင့်ခ်များ ထို့ကြောင့်ဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသူတို့လိုအပ်လျှင်လျင်မြန်စွာကလစ်နိုင်စေရန်
"Linux distros အားလုံးကဲ့သို့ Ubuntu တွင် firewall တပ်ဆင်ထားသည်။ အမှန်တော့ဒီ firewall ဟာ kernel ထဲမှာထည့်ထားတာပါ။ Ubuntu တွင် firewall command line interface ကို script အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အစားထိုးခဲ့သည်။ သို့သော် ufw (Uncomplicated FireWall) တွင်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသော graphical interface တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဤ post ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ firewall ကို configure လုပ်ရန် gufw, ufw graphical interface, gufw ကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ပြပါမည်။" Ubuntu မှာ firewall ကိုဘယ်လို configure လုပ်မလဲ
Ubuntu မှာ firewall ကိုဘယ်လို configure လုပ်မလဲ
ဤရိုးရှင်းသော script ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင် firewall ကို iptables ဖြင့်ဖန်တီးပါ
ဤရိုးရှင်းသော script အပိုင်း ၂ ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင် firewall ကို iptables ဖြင့်ဖန်တီးပါ
သင်၏ကွန်ယက်ကို Iptables - Proxy - NAT - IDS: အပိုင်း ၁ ဖြင့်လုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်း
သင်၏ကွန်ယက်ကို Iptables - Proxy - NAT - IDS: အပိုင်း2ဖြင့်လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
"Iptables သည် packets များကိုစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော Linux kernel (module တစ်ခု) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဤအရာသည်ဆိုလိုသည်မှာ Iptables သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့သင် ၀ င်ရောက်လိုသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက် / ဒေတာ / အထုပ်များပါ ၀ င်သည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။" အသစ်များ၊ စိတ်ဝင်စားသူ၊ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Iptables
Firewall Config: firewalld အတွက် GUI configuration tool
Firewall Config ဆိုတာဘာလဲ။
Linuxeros တော်တော်များများသိပြီးကြမှာသေချာပါတယ် Gufwမရ။ သို့သော်၎င်းကိုမသိသူများအတွက်၎င်းသည် console firewall application (CLI) အတွက် graphical user interface (GUI) ကိုပေးထားသောကြောင့် Linux native firewall (Iptables) ကိုစီမံရန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Ufwမရ။ ထိုအရာတို့တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် Gufw ၎င်းတို့သည် preconfigured၊ ဘုံ p2p (သို့) တစ် ဦး ချင်းဆိပ်ကမ်းများအားခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့ဘုံအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ဒါပေမယ့်ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့ app တစ်ခုရှိတယ် "Firewall ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ" ၎င်း၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အကျဉ်းအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"၎င်းသည် firewalld အတွက် graphical configuration tool တစ်ခုဖြစ်သည်။" firewall-config ကို
လျှောက်လွှာဖြစ်ခြင်း Firewalld လာမည့်:
"ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုများ (သို့) interfaces များအတွက်ယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးသော network zones / firewalls များအတွက် dynamically managed firewall ကိုပံ့ပိုးပေးသော console application (CLI) ၎င်းသည် IPv4၊ IPv6 firewall configuration များ၊ Ethernet bridge များနှင့် IP pools များကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် runtime configuration options များနှင့်အမြဲတမ်းရွေးချယ်မှုများအကြားခွဲခြားမှုကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းသည် D-Bus interface ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် firewall ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်။"
ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုရှင်းပြတာကောင်းပါတယ် Firewalld ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အတွက် frontend controller တစ်ခုဖြစ်သည် ptရာဝတီ, ကဲ့သို့ Ufw၊ ၎င်းသည်ကွင်းဆက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများအစားဇုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များကိုအင်တိုက်အားတိုက်စီမံစေပြီးအစည်းအဝေးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုမချိုးဖောက်ဘဲနောက်ဆုံးသတင်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ အကျိုးဆက်၊ Firewalld အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ ptရာဝတီ.
D-Bus API ကိုဖြည့်ပါ
IPv4, IPv6, bridge နှင့် ipset အထောက်အပံ့
NAT IPv4 နှင့် IPv6 ကိုထောက်ပံ့သည်
ဇုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် icmptypes စာရင်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်
ဇုန်များရှိ Firewall စည်းမျဉ်းများ
ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ firewall ကိုမွမ်းမံနိုင်သောအပလီကေးရှင်းများ၏အမည်စာရင်း
Linux kernel modules များကိုအလိုအလျောက်တင်ခြင်း
ဆာဗာနယ်ပယ်၌ Firewall (Firewall) များအတွက်ခိုင်မာသောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပြည့်စုံသောဖြန့်ဖြူးမှုများအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကွန်ပျူတာ၏ဂရပ်ဖစ်အသုံးချမှုနယ်ပယ်၌ရိုးရှင်းသောသုံးစွဲသူများ (နည်းပညာမဟုတ်) ၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည် အကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ခြင်း အသုံးဝင်သောရိုးရှင်းသော app တစ်ခုအားအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် "အိမ်ရှင် Minder"မရ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည် မိဘထိန်းချုပ်မှုစနစ် (firewall) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှုအချို့ရှိသည် GNU / Linux Distros.
Host Minder: မလိုချင်တဲ့ domains တွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့အသုံးဝင်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ app တစ်ခု
"၎င်းသည်မလိုအပ်သော web domains များကိုပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဖိုင်အားလွယ်ကူစွာ update လုပ်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းသော graphical user interface တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။/etc/hosts»သင်၏ GNU / Linux Distro မှ StevenBlack ၏စုစည်းထားသော host / hosts file လေးခုမှတစ်ခုသို့။ ဤပေါင်းစည်းထားသော host ဖိုင်များသည်ကြော်ငြာများ၊ အပြာ၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များနှင့်သတင်းတုများကဲ့သို့ ၀ က်ဆိုက်များကိုသင်ပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။"
တစ်ဦးအတွက် နောက်ပို့စ် ငါတို့သုံးတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ် Firewalld y "Firewall ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ".
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်နှစ်ခုလုံးကိုသုံးသည် "Firewall ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ" como Gufw ကိုင်တွယ်ရန် ptရာဝတီ (native linux kernel firewall) တွင်မည်သည့်ပုံမဆို GNU / Linux Distro ၎င်းတို့၏ installer packages များရရှိနိုင်သောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်သောနေရာသည်စူးစမ်းလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အထက်ပါအချက်များအားလုပ်ဆောင်ရန်နည်းပညာနှင့် terminal (console) ဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာမရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည် အကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအခြားနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Firewall Config: Gufw Firewall အတွက်အကောင်းဆုံး graphical Firewall အစားထိုးမှု
Multimedia Server: MiniDLNA ကို သုံး၍ GNU / Linux တွင်ရိုးရှင်းသောတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ